ikhaya » Okufumaneka » IThekhnoloji yaMiselwa kwiNgcambu - Ngoku ngaba abaSasazo baphuphisana njani
IThekhnoloji yaMiselwa kwiNgcambu - Ngoku ngaba abaSasazo baphuphisana njani
NguTony Hanada, uMlawuli oLawulayo Shotoku
Kubaluleke kangakanani inkxaso yekhamera kwixesha elitsha le4K / 8K, VR / AR?
Ukuqhubela phambili okukrakra kwikhamera kunye neteknoloji yokudluliselwa kwedatha kuye kwandisa intsimi yokudlala kubaboneleli bokuqukethwe bobukhulu obukhulu kunye neentlobo, ukuphakamisa izibhengezo kulabo basasazo abasasaqhelwanga ukukhuphisana neenqwelo zezixhobo ze-smartphone kunye neekhamera zevidiyo. I-4K kunye ne-8K zekhamera zevidiyo kunye neethelevishini, xa zikhethwa kuphela, zikhethwa nje kuphela, kodwa zihlala zikhona. Amadivaysi ayekade efana ne-rekodi kunye nokurekhoda kwi-SD, ngoku unikezele ngokugcwele HD Ukurekhoda kwifom ekulungele ukulayishwa ngokukhawuleza kunoma iyiphi inombolo yewebhsayithi yokubamba iividiyo. Ukusasaza ividiyo ye-intanethi, ngokukhawuleza kwaye engabonakaliyo, inikeza ukhetho oluthe xaxa kunye nomxholo wasezantsi kubantu abaninzi kunanini ngaphambili. Oku kunyuka kwiindlela ezikhoyo kukhokelela abathengi abaninzi ukuba banqume intambo ngokupheleleyo, baphonse ibhokisi yekhefu. Ngezihlandlo ezinjalo eziguqukayo, ngaba ngaba basasaza bendabuko bayenzani ukuzuza kwakhona ukubuyisa nokubuyisa abaphulaphuli babo?
UMTHIMA UYA KUHLAWULWA
Iindleko zokuvimbela ukudala umxholo kunye nokuzisasaza kwihlabathi aziyizikhusela zokungena. Namhlanje, enezixhobo zokutshala imali encinci kunye nolwazi oluthile lwezobugcisa, nabani na onokwenza ishaneli sabo, basasaze ngehlabathi lonke, bafumane amawaka eenkulungwane-ukuba ngabazibukeli bezigidi. Intuthuko kwi-intanethi ye-intanethi yokudlulisa idatha, kwakhona, iye yavutha nje amalangabi njengoko bathengisa i-video-on-demand providers bhengeze inani lokurekhoda kwabangabhalisi emva kweminyaka. Ukukwazi ukubukela oko ufuna, xa ufuna ukuba kuqinisekisile lo mkhwa, kodwa kukho imimandla emininzi apho abatsha abangenayo banokuba nzima ukukhuphisana. Nangona amandla angase ahlale enomxholo oqingqileyo, ubuthathaka obuncitshiswayo ukungabikho kolwazi malunga nezinto eziyimfuneko ukuvelisa ividiyo esemgangathweni.
Abasasazo bendabuko banembali ende kunye nolwazi lwezobugcisa bokucoca. Ama-studios, abaqhubi bekhamera, kunye neqela elibanzi lokusasazwa lihlambulukile, liyingcali, kwaye lizinikezele ekuveliseni umxholo omalunga neeholide. Nangona kunjalo, ngelixa le nto ingaba ngathi ikulungele ukuba neyona nto iphezulu, ukhuphiswano lubonakala libethe ngokuchanekileyo kwi-Achille isithendeleko: Ukuhlanganiswa okufutshane kunye nobuchule bokuqulunqa bokuqala kunye nobuchule bokuqulunqa.
Enye inqubo enjalo yinto ebonakalayo kunye neyona nto iyenyukayo ekufumaneni ukuthandwa phakathi kwabaninzi abasasaza emhlabeni jikelele ngokubanika amandla okuvelisa imifanekiso emangalisayo kunye nezidlo ezingenakwenzeka. Iindaba zeendaba ziyakwazi ukusebenzisana neentlobo zeentlethi, ezopolitiko, kunye nayiphi na enye idatha yefayile ebonakalayo ngokuzimeleyo kunye nezobugcisa, ngokudala iiprogram ezithandekayo ngexesha langempela.
Kubaluleke kunoma iyiphi i-studio ebonakalayo yikhono lokulandelela indawo ngqo yekhamera. Isitshixo kukutyalomali kwisixhobo esinakho ukulandelela ngokuchanekileyo i-Pan, i-Pilt, i-Zoom, Focus, Ubukhulu, kunye nokuhamba kwe-XY kumgangatho kwaye uvelise ngokufanelekileyo loo datha kwi-injini ye-graphic, i-jitter-free. Ingxaki zininzi iinkqubo ezinokuthi zihlupheke kwi-data "jitters", zinzima kakhulu, okanye zibiza kakhulu.
Shotoku Iinkqubo zokuSasazwa ngumzekelo womenzi wenkxaso yenkhamera ejolise ukujongana nale miba. Ukubandakanya iimpawu ezifana nokulinganisela okupheleleyo ngaphantsi kwemizuzwana ye-30, inkqubo yokumisa kunye nokulibala efuna ukulinganiswa kwakhona, kunye ne-interface yayo ye-serial touch-screen interface (SPI-Touch), amanyathelo asebenzayo okuphuhlisa iimveliso ezivumela abaqhubi bekhamera Ixesha lokugxila ekumiseni izihlunu zabo zinikezelwe phambili.
I-NAB iya kubona ukuqaliswa komnye onjalo. I-Graphica, uluhlu olutsha lwe-VR iikrrane ezakhelwe ngenjongo yokwenza izinto eziyimfuneko kunye nezongeziweyo, zahlanganiswa ngokusuka kumhlaba kunye nomvelisi we-crane CamMate. Ibonelela ngokuchanekileyo ngokulandelelanayo kokulandelela kwimveliso emilungeleyo ye-retro ekhoyo, kwixabiso lentengo apho ama-studios amaninzi kufuneka afumaneke kakhulu. I-Graphica iquka i-7 yemveliso ehlukeneyo kunye nobude beengalo ze-2.5m ku-12.4m kwaye iya kuboniswa Shotoku C6015.
YINTONI I4K YOKWENZA KUKUSEBENZA KOMKHAYA?
I-4K-kunye ne-8K-sele isetyenziswa ukudala imifanekiso emangalisayo kwiindlela ezicingayo njengoko zifuna iinkqubo ezinikezelayo kunye nokukhuthaza ukuzithemba. Kungakhathaliseki ukuba umgangatho wekhamera kunye ne-lens, umfanekiso oveliswayo unobungozi obunelisekanga okanye obungenakunceda. Ngaloo ndlela, kubaluleke kakhulu ukusebenzisa iqhagamshelwano elisebenzayo elinamandla, elithembekileyo, elisebenzayo eliphezulu lekhamera ngenkxaso ehamba phambili, enembile, kunye nezolileyo ekuqhubeni ukuhamba emoyeni nasiphi na ukuhlawula. Enyanisweni, loo mfuno iya kwanda njengoko iimfuno zomgangatho ophakamileyo womfanekiso zikhula. Inkqubo yokuxhasa ikhamera isoloko ixhomekeke kule migaqo-siseko efanayo, kunye nabakhiqizi abaqonda ukuxhaswa kweemarike ngemveliso esemgangathweni kunye nenkonzo ejongene neemfuno zabaxhasi ngoku, kwaye kuya kuba ngamashumi eminyaka kwixesha elizayo.
Uxinzelelo olutsha ukusuka kukhuphiswano lunabamemezeli bendabuko abafuna iindlela zokudala ukuzuza kwakhona kwiimarike nokwakha isiseko sabo sobubukeli. Ukusetyenziswa kwamakhamera kunye nama-lens anikezela ngokubhekiselele kunomgangatho akungabalulekanga kubalulekile, kodwa ukusebenzisa inzululwazi ye-VR iteknoloji ephezulu yokuvelisa nokusabalalisa umxholo ophefumlelweyo unokuba ngumphambili wokufikelela emaphethelweni kwiintsana ezitsha edolophini. Abasasazo bendabuko banobuncwane bobuchwepheshe nobugcisa. Isinyathelo esilandelayo sibambanisa ezo ngcamango ngezona zixhobo ezifanelekileyo, ezikhethiweyo zokuxhasa umsebenzi.
2016 NAB Bonisa I-2016 NAB Bonisa i-Job Fair 2016 NAB Bonisa iindaba Izabelo zokuBasa Umagazini we-Beat Broadcast Injineli yokusasaza Ukusasazwa kwezobunjineli KwiNkomfa yabasasazo KwiNkomfa yoSasazo NAB 2015 NAB 2016 NAB Bonisa NAB Bonisa i-2016 Nab ubonisa imisebenzi NAB Bonisa i Las Vegas NAB Bonisa Ukubhaliswa NAB16 Nabshow Umbutho kaZwelonke woLwazi lwabasasazo Ihlabathi loPhuhliso lweZithuba	2017-05-04
Previous: U-Akamai kaMichael Fay kwi-2017 #NABShow
next: Ixesha lokuQala elipheleleyo - Ukuqeshwa ngoku NOW - SoHo NYC
Hey Buddy !, Ndiyifumene le ngcaciso: "IThekhnoloji yenzeke kwiNgcambu - ngoku Abaqhubi baKhuphiswano". Nantsi ikhonkco lewebhu: http://www.broadcastbeat.com/technology-even--n------broadcasters-compete/. Enkosi.